Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कट्रिना कैफ र बरुण धवन ‘एबीसीडी ३’मा देखिदै, वरुणको पारिश्रमिक २१ करोड ! - Pnpkhabar.com
कट्रिना कैफ र बरुण धवन ‘एबीसीडी ३’मा देखिदै, वरुणको पारिश्रमिक २१ करोड !
नायक वरुण धवन रेम डिसुजाले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘एबीसीडी ३’का लागि व्यस्त छन् । यो चलचित्र भारतकै महंगो चलचित्र बन्ने अड्कल गरिएको छ । डान्सको कथालाई पर्दामा आकर्षक तरिकाले देखाउने तयारी यसका निर्माताको छ ।
यो चलचित्रमा पहिलो पटक नायिका कट्रिना कैफ र नायक वरुण धवन एकसाथ काम गर्दैछन् । यो चलचित्रलाई फोर डीमा रिलिज गर्ने तयारी समेत यसका निर्माताको छ । अहिले यो चलचित्र नायक धवनको पारिश्रमिकलाई लिएर चर्चामा छ । यो चलचित्रका लागि बरुणले २१ करोड पारिश्रमिक लिएको भारतीय मिडियामा उल्लेख छ ।
बरुणले मागेको २१ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिकलाई यसका निर्माताले स्विकार गरेको खबर भारतीय मिडियामा उल्लेख छ । बरुण अहिले बलिउडमा नयाँ जेनेरेशनका सवैभन्दा चलेका नायक हुन् । उनी डान्समा पनि पोख्त मानिन्छन् ।